« Nosy Be Jazz Festival »: handray tarika maherin’ny 20 | NewsMada
« Nosy Be Jazz Festival »: handray tarika maherin’ny 20
Tonga ilay fotoana. Hotontosaina ny 19 hatramin’ny 22 avrily ho avy izao ny andiany fahatelo amin’ny « Nosy Be Jazz Festival ». Vao vita ny andiany faharoa, avy hatrany dia niatrika ny fikarakarana ity andiany manaraka ity ny komity. Nisy ny fampahafantarana ny andinindinin’ny hetsika omaly, tetsy amin’ny Infini’Thé Ivandry. Fantatra nandritra izany fa tarika maherin’ny 20 eo ho eo no handray anjara, mandritra ireo telo andro an-danonana ireo, ao Nosy Be.
Anisan’ireo andrasana amin’ity i Monika Njava, Dean Nookadu quartet avy atsy amin’ny Nosy Maorisy, Edmundo Carneiro hitarika ireo mpilalao amponga avy any Brezila, Nicolas Beaulieu, mpitendry gitara avy atsy amin’ny Nosy La Réunion, Gaël Horellou avy any Frantsa, Marvin Burlas avy any Espagne, sns. Hiverina handray anjara ihany koa i Aina Cook sy i Kyle Allen vadiny, arahin’i Ando Cook anadahiny. Eo koa i Jaojoby, izay mpiahy ny hetsika amin’ity taona ity, arahin’ny zanany Lucas, mpitendry gitara misokatra amina karazan-gadona maro.
Hiara-dalana amin’ny mozika jazz ihany koa ny haify sy hainahandro, amin’ity andiany ity. Hanana ny toerany mantsy ny hetsika “Haify mampihavana Nosy Be”, izay hanehoan’ireo mpandray anjara ny karazana hainahandro mampiavaka ny tsirairay.